MAXAY TAHAY MALAB BACO AH OO FAA'IIDO LEH: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGA - BEEKEEPING
Wax qarsoodi ah maaha, taas oo ku xidhan dhirta ay ka mid yihiin shinni urta nectar, dhadhanka iyo faa'iidooyinka malabku way kala duwan yihiin. Maanta waxaan ka hadli doonaa qiimaha ugu qiimaha badan - malab baqdi ah. Si aad u hesho malab baqti, shinni waa in ay soo ururiyaan nectar gaar ahaan ka soo ubax ubax, taas oo, sida aad qiyaastay, waxay na siinaysaa buckwheat. Waxaad baran doontaa faa'iidooyinka malab ee jirka iyo sida loo isticmaalo si habboon u isticmaalka daawada dabiiciga ah ama qurxinta.
Farqiga malabkeen ka soo noocyo kale
Honey waxaa inta badan lagu kala saaraa midab, tan iyo, iyadoo ku xiran aagga nectar la ururiyey (steppe, kaynta-steppe ama kaynta), midabka malabku sidoo kale wuu kala duwan yahay. Waxay noqon kartaa taajir huruud ah ama midab madow, oo ay ku jiraan dhammaan midabada midabada midabadan.
Midabka malabku waa madow. Waxaa ugu fudud in la aqoonsado xirmooyinka sare, maaddaama ay ku jirto midabka "Coca-Cola", ama marka la barbardhigo cabitaano kale, "Baikal". Calaamaddani waxay aqoonsan doontaa malab dukaanka ama dukaanka, laakiin haddii aad haysato fursad aad ku tijaabiso - isticmaal fursadan.
Xaqiiqdu waxay tahay in midab madow yahay sidoo kale malab, nectar taas oo shinni ah lagu soo ururiyey kaynta. Sidaa daraadeed, waxaa lagu wareeri karaa qashin qubka iyo alaabta oo gebi ahaanba ka duwan.
Malabkana waxaa ku jira wax yar oo qadhaadh ah iyo dhadhan dhadhan. Ka dib marka isticmaalka hal malab ee cunaha ayaa bilaabay inuu saxdo yar yar, taas oo la xiriirta halbeegga sheyga.
Waa muhiim! Foornada bakeeriga waxay bilaabmaysaa sonkorta si ka dhakhso badan noocyada kale ee malab.
Malab Bacal: calories, vitamiin iyo macdan
Way adag tahay in laga hadlo habka saxda ah ee malabka, maadaama ayan suurtagal ahayn in "barnaamij" lagu beero si ay u ururiso nectar oo keliya ka soo goosan. Waxay keeni karaan nectar, tusaale ahaan, laga bilaabo geedaha cawska caadiga ah, iyo halabuurka horey u beddelay. Waxaa muhiim ah in la xusuusto in malabku ka badan yahay biro, enzymes, sonkor, fiitamiin iyo macdan.
Waxaa jira in ka badan 40 microeleys malab, taas oo saameyn togan ku leh jirka aadanaha.
biotin (fitamiin H);
niacin (fitamiin PP);
tokopherol (vitamin E);
Cuntada bakeeriga ah ayaa hodan ku ah sonkoraha kala duwan: glucose (42%), fructose (41%), sukrose (2%).
Joogitaanka sonkorta ayaa go'aamiya nuxurka calorie ee malabkani, kaas oo u dhigma 309 kcal. Marka la barbardhigo: qiyaasta kalooriga ah ee 100 g oo ah malabku wuxuu la mid yahay walxaha kalooriga ah ee 150 g oo ah digaag la shiilay.
Si kastaba ha ahaatee, waa in la fahamsan yahay in malabku aan la wada baabbi'inin xitaa badan oo xitaa daawooyinka, taas oo macnaheedu yahay in alaabta waxtarka leh aysan saameyn doonin qaabka.
Sidee loo cunaa malab baco u leh jirka?
Iyadoo la tixraacayo ka kooban walax malab ah, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in shinni-tarku ay hodan ku tahay fitamiinada kala duwan iyo kuwa yaryar, taas oo macnaheedu yahay inay aad u faa'iido u leedahay jirkeena.
Honey waxaa lagu magacaabi karaa "dabiici ah dabiiciga ah", maadaama badeecadani aysan kaliya ku dhicin, laakiin sidoo kale waxay dileysaa dhammaan bakteeriyada. Qalabkaan waxaa loo isticmaali karaa oo keliya in lagu karsado ama lagu ilaaliyo, laakiin sidoo kale daaweynta cudurrada kala duwan ee bakteeriyada.
Honey wuxuu awood u leeyahay inuu la dagaallamo fayraska, sidaas darteed waxaa si guul leh loo isticmaalaa si loo daaweeyo hargabka iyo cudurrada faafa.
Malabka bakeeriga ayaa si guul leh loogu isticmaalaa kondomoole, sidaas darteed faa'idooyinka haweenku lama dhimi karo. Iyadoo caawinta sheyga shinni ka nadiifiyaa maqaarka, ku siib baaxad iyo ka yareeyso barar. Sidoo kale, waxaa haboon in la ogaado in malabku aad u faa'iido u leeyahay haweenka uurka leh, maadama ay ka kooban tahay mid la mid ah kan dhiigga, inkastoo aan dhicin.
Waxyaalaha ayaa ka caawiya sidii loo xoojin lahaa nidaamka difaaca jirka, si ay ugu faafiyaan jirka oo dhan ee fitamiinada iyo raad raacaha muhiimka ah. Hantida xiisaha leh ee malabku waa marka la soo saaro badeecada ka hor dhalashada, waxay kicisaa wareegga dhiigga ilmo-galeenka waxayna caawineysaa in hooyadu ka badbaado dareenka xanuunka.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan qaadan malab waxaad u baahan tahay inaad la tashato dhakhtar. Haddii aadan si wacan u isticmaalin sheyga shinni, waxaad "abaalmarin kartaa" ilmahaada aan dhalanin xasaasiyad.
Xilliga qaboobaha iyo xilliga gu'ga, malabku wuxuu ka caawiyaa inuu la dagaallamo avitaminosis iyo la'aanta maadooyinka macdanta. Badeecadu waa ku filan tahay in maalin walba la wada isticmaalo tiro yar si ay uga takhalusaan shaqada dheeraadka ah iyo nacaybka iyo in jirka loo siiyo tamar dheeraad ah oo loogu talagalay shaqada oo dhan.
Honey wuxuu ka caawiyaa dadka qaba xanuunada anemia, dhiig-karka, boog-garka, dhibaatooyinka leh xididdada dhiigga iyo sunta.
Wax soo saarka caanuhu wuxuu caan ku yahay xaqiiqda ah in laga saaro radionuclides jirka, taas oo ah, waa badeecad aan loo baahnayn oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya dhirta tamarta nukliyarka ama walxaha shucaaca.
Sidaa darteed, sifooyinka daawooyinka ee malab buckwheat waa ay adag tahay in ay ka weyn tahay. Waxsoosaarka waxaa loo isticmaali karaa sida cuntada lagu daro si loo buuxiyo bixinta fitamiinada, sidaas daraadeed lagama maarmaanka u ah daaweynta cuduro kala duwan.
Sidee loo hubiyaa malab bakeeriga ah ee dabiiciga ah iyo tayada
Malabka Bacaha waa badeecad qaali ah oo qaali ah, sidaas darteed waxaan ka hadli doonaa sidii loo hubin lahaa dabiiciga iyo tayada.
Marka hore, malab dabiici ah oo fiicani way ka duwan tahay been abuur, - joogteynta.
Honey waa inay noqotaa mid aad u muuqata, ama sonkorta oo u rogto tiro qoyan oo qoyan.
Marka xigta, fiiri on midabka. Xaqiiqdu waxay tahay in aan malab dabiiciga ahi lahayn midabyo aan la fahmi karin oo midab kala duwan leh, ama midab iftiin leh, taas oo ah mid madow ama qafiif ah qaybo ka mid ah weelka.
Ma taqaanaa? Honey waa mid ka mid ah badeecooyinka ugu been abuurka ah, maaddaama qiimaha sonkorta beddelku uu yahay 5-10 jeer ka jaban badeecada asalka ah. Beddelka sonkorta dareeraha malabka waxaa loo isticmaalaa Swiserland, halkaasoo ay ku badan tahay isticmaalka "swiss Swiss", taas oo ka kooban qiyaas ahaan 30% malab shinbir leh 70% sharoobada malabka.
Inta lagu jiro iibka waa in la furo weelka malab oo ur. Cunto malab bakeeriga ah waxay bixisaa wax kasta oo been abuur ah, tan iyo badeecada dabiiciga ah u egtahay ubax, iyo urta lafteedu waa mid aad u xoog badan oo aan "baabi'in" wakhti ka dib. Haddii malab uusan wax urin, waa inaadan qaadin.
Haatan ka wada hadalno siyaabo macquul ah si loo aqoonsado alaab been abuur ama qasi leh:
Ku rid qiyaasta malab ah warqad. Haddii muddo yar ka dib muuqaalka biyaha u muuqda xaashida - malab waxaa lagu qasi karaa biyo ama sharoobada.
Iyada oo laga caawinayo qalin kiimikada, waxa kale oo aad baran kartaa waxyaabha "qarsoon". Haddii malabku aanu ahayn mid dabiiciga ah, macnaheedu waa qalin ayaa isla markiiba falcelin doona marka uu taabto sheyga (midabka ayaa isbeddelaya).
Malabka dabiiciga ah ayaa si dhammaystiran u tirtiray aalkolada xooggan, oo la badhxay ama aan cagaar ahayn - wuxuu siinayaa faleemo.
Xeerarka loogu talagalay kaydinta malab baqdi ah
Dad badan ayaa ka welwelsan su'aasha ah inta malab ah bakeeriga la keydiyo. Sida kor ku xusan, malabku waa dabeecad dabiici ah, taas oo macnaheedu yahay in uu si aan fiicnayn u xumayn. Qofna ma maleynin in malab, dhab ahaantii, waa shey rasmi ah oo dhamaystiran oo shinni soo saarta. Hannaanka cayayaanka nectar, ka dibna ku soo noqda malab (taas oo ah, waa la dheefay).
Dareemis yar ayaa ka caawisa in la fahmo in malabku yahay badeeco joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha kaydinta waxay si weyn u saameynayaan faa'iidada ay leedahay.
Heerkulku wuxuu u dhexeeyaa -5 illaa illaa + 20˚S waxay ku habboon yihiin kaydinta alaabta.
Waa muhiim! Haddii malabku u kululaado heerkul ah 40 ° C iyo wixii ka sareeya, waxay lumin doontaa qaar ka mid ah fiitamiinada iyo enzymes.
Kaddibna waa inaad daryeesho baakadka. Honey nuugo qoyaan aad u wanaagsan, sidaa darteed ma aadi kartid furan. Kareemka dhalada oo si adag u daboolaya daboolka ayaa ku habboon daraasadda. Sodobkan, malabku ma awoodi doono inuu nuugo qoyaan badan oo ka yimaada hawada, taasoo macnaheedu yahay in uusan noqon doonin biyo.
Sidoo kale ka taxadar in shidaalka tooska ah ee qorraxda aan ku dhicin malab, haddii kale shinniintu waxay luminaysaa fitamiinada qaarkood.
Waxaa intaa dheer, fiitamiinada lumay, macdanta ama enzymes ma saameynayaan dhadhanka alaabta.
Sidaa awgeed, haddii malabku faa'iido yar yahay, markaa xitaa ma ogaan doontid.
Waa muhiim! Nolol shinni malab ma aha mid xadidan! Haddii nolol shaf ah oo yar ku qoran lagu qoro weel la iibsaday malab, waxaa haboon inuu ka fekero astaamaha dabiiciga ah.
Doorka malabkii buckwheat ee cosmetologists
Malabka Bacaha waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya qayb ka mid ah waji-qarinta, laakiin sidoo kale xoojinta timaha.
Aan ku bilowno maskadaha. Tan iyo malabku wuxuu nuugo maqaarka leh fitamiinada iyo miiqyada, waxaa loo isticmaali karaa sida qaybta ugu muhiimsan ee maaskarada.
Ma taqaanaa? Kuwa ugu badan ee dhoofiya malabaha adduunka waa afar waddan: Shiinaha, Turkiga, Argentina iyo Ukraine.
Maaskaro maqaarka caadiga ah. Qaado mid ka mid ah ukunta ukunta oo ku xoqin 1 tsp. malab iyo casiir tufaax cusub. Isku darka soo baxa waxaa laga dalbadaa wejiga wuxuuna qabtaa 15 daqiiqo. Ka dib markaa, ku dhaq maaskaro biyo diirran.
Maaskarada maqaarka saliid leh. Isku qas 1 tbsp. l istaarijin, 1 tsp. malab iyo cusbo badan. Ka dib markaad isku dhafan tahay, ku dar 1 tbsp. l caano dhanaan iyo codka wejiga. Qabo maaskaro illaa 15 daqiiqo. Waqti kadib, ku dhaq biyo qabow.
Maaskaga maqaarka qalalan. Isku qas 2 tbsp. l wax shinni ah oo leh 2 tbsp. l saliid saytuun iyo qadar isku mid ah saliida gabbaldayaha. Marka xigta, isku dar ah waxaa loo kululeeyaa 35-38 ˚ C oo ku rid faashad ama nadiif ah. Marka xigta, ku rid wejiga 15-20 daqiiqo. Ka saar maaskaca wejiga leh weel warqad iyo kareemo.
Waa muhiim! Haddii aad ka dib codsanaysid cuncun maskaxda, guduudasho ama gubasho, waa mid deg deg ah in aad ku biyo raaciso biyo diirran.
Si aad u xoojiso timo malab, kaliya ku dar miisaanka alaabta ee shaambadaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la xusuusto in haddii malab la shiiday, waxay si fudud u degi doontaa hoosta mana jiri doonto wax saameyn ah.
Intaa waxaa dheer in lagu daro malab si shaambo, waxaad u baahan tahay inaad maalin kasta xoqdo xididdada timaha. Waxa ugu wanaagsan in la sameeyo tan nus saac ka hor intaadan qubeysan.
Si ay u noqoto dawo dhab ah, waa in la qaato qiyaaso gaar ah ama isku dhafan qaybo kale.
Waa muhiim! Haddii aad xasaasiyad ku leedahay malab, waa in aanad qaadan daawooyinka ku salaysan.
Iyadoo dhiig la'aani. 1 l oo malab ah waxaad u baahan tahay inaad ku darto 8 g oo ah xididka ginseng qalalan (oo ah foomka budada ah) kuna adkeyso wiig, adoo isku dara dhowr jeer maalintii. Qaado 1/5 tsp 2 jeer maalintii.
Marka uu dhiig karka, dareenka ama hurdo la'aan waxaad u baahan tahay inaad ku darto 1 tbsp si 1 koob oo ah macdanta macdanta. l malab iyo casiir la tufaaxay mid ka mid ah liinta. Cab cabitaankan calool madhan. Koorsada soo dhaweynta - ugu badnaan 14 maalmood.
Waa muhiim! Cuntadani maaha mid ku habboon dadka qaba xanuunada caloosha ee sii kordhaya.
Nadiifinta jirka ee sunta. Waxaad u baahan doontaa 400 g oo ah dhirta la qalajiyey, 200 g oo khudradda la qalajiyey, 200 g oo berri ah iyo 200 g oo ah malab baqti ah. Miraha la qalajiyey waxay u baahan yihiin in ay gooyaan xaalad qoyan oo isku dhafan iyo malab. Qaado dawadan dhadhan fiican ee aad u baahan tahay 1 tbsp. l ka hor wakhtiga jiifka.
Kahortagga Avitaminosis. Si aad u diyaariso isku dar ah, qaado 3.5 kg diirka walnut, 1 kg diirka fuudka iyo 1 l oo malab ah buckwheat. Si yaryar u jilciya lowska oo ku dar malab diirran (sidaas darteed maaddooyinka ayaa ka fiican isku dhafan). Qaado qadar yar inta lagu jiro xilliga jiilaalka iyo yaraanta guga ee fitamiinada.
Daawee qufac. Habka qadiimka ah ee aad u wanaagsan wuxuu ka caawiyaa in laga adkaado xitaa qufaca ugu adag. 350 ml oo ah caano diiran oo la kariyey waxay qaadataa 1 tbsp. l malab bakeeriga ah iyo shaaha saddexaad ee soodhaha. Ka sii fiican ka hor wakhtiga jiifka si aad u diiriso marinada hawada.
Daaweynta nidaamka jimicsiga. Waxaan ka dhigi karnaa tincture ee midhaha qoraxda buurta (3 tsp) Miro la jajabiyey halkii 400 ml biyo karkaraya. Ka dib markii lowska sii socdo dhowr saacadood, faleebo ayaa la qaadi karaa iyada oo la leh malab buckwheat.
Waxaa jira cuntooyin badan oo caawiya in laga takhaluso cudurka "caanaha" ugu caansan. Xasuuso in daawo, inkastoo ay ku saleysan tahay dabeecada dabiiciga ah, waxay keeni kartaa dhibaatooyin haddii loo isticmaalo.
Contraindications iyo waxyeello suurtagal ah in malab udgoon
Wax soo saarka beekeeping waxay leedahay khilaafka u gaar ah, maadaama ay ka kooban tahay tiro badan oo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan ee raadadka iyo enzymes. Sidaas darteed daaweynta malabku "kuma abaal marin" dhibaatooyinka kale ee caafimaad, waxaad u baahan tahay inaad ogaato hubaal ahaan dhacdooyinka malabku waxyeelo halkii ay ka caawin lahaayeen.
Maxay yihiin waxyaalaha ka hortagga malabku?
Honey ma qaadi karo sonkorowga. Inkasta oo sokorada dabiiciga ah ay qayb ka yihiin sheyga, weli way khatar yihiin, maadaama ay saameyn karto sii xumeynta cudurkan.
Honey waxay u tahay mid halis u ah carruurta yaryar sida ay u tahay diabetics, maadaama ay tahay xasaasiyad adag.
Da'da 5-6 sano, carruurta waxaa la siin karaa malab kaliya ka dib markaad la tashato takhtar.
Waa inaad sidoo kale fahamtaa in xaddi badan oo alaab ah ay yeelan karaan cawaaqib kala duwan. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in aad naftaada u xadido adigoo isticmaalaya sheygan, gaar ahaan haddii aad dhibaato ku qabto miisaanka xad-dhaafka ah.
Ka dib markaad ka hadashid waxtarka iyo khatarta malabku, waxaa la dhihi karaa, inkasta oo horumarinta warshadaha cuntada, ayan suurtagal ahayn in la bedelo sheygan qiimaha leh. Isticmaal bakhaaradaas fiitamiinada iyo macdanta si aad u taageerto jirkaaga, nadiifiso oo loola dagaalamo cudurada.